မြန်မာလူမျိုး ဂလုံဦးစောက အင်္ဂလိပ်သွေးထိုးမှုကြောင့် ဒို့ချစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို လုပ်ကြံခဲ့သည်။ဦးနုခေတ်မှာ ပါတီစွဲတွေ အချင်းချင်းသတ်ဖြတ်မှုတွေ လုပ်ခဲ့သည်။ ဦးရှုမောင်ကြီးခေတ်မှာ တိုင်းပြည်ချစ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေကို သတ်ခဲ့တာ မနည်းပါဘူး။ နအဖခေတ် တစ်လျှောက်လုံး စစ်သားတွေကို ဆဲခဲ့ မုန်းခဲ့တာလဲ နှစ်ပေါင်း ၂၀ကျော်ပါပြီ။ မြန်မာအချင်းချင်း သတ်ဖြတ်မှ.. ရန်သူလို သဘောထားမှ နိုင်ငံရေးလို့ ခေါ် သလား? ၀ါဒမတူ.. တိုင်းရင်းသားမတူတဲ့ မြန်မာတွေအကြား နားလည် စာနာပေးဖို့ မကြိုးစားတော့ဘူးလား?
အင်တာနက်ကျေးဇူးကြောင့် ဒီမိုမီဒီယာတွေ လိမ်ညာမှုနဲ့ ဒီမိုအစိုးရတွေ လူသတ်တဲ့ အမှန်တရားကို သိလာပါပြီ။ အခုဗီဒီယိုမှာဆိုလဲ မီဒီယာတွေရဲ့ လိမ်ညာဖန်တီးမှုတွေကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ကျုပ်တို့တွေ ကလေးဘ၀ကတည်းက ဒီမိုကရေစီဆိုတာကြီးဟာ သိပ်ကို ကောင်းတယ်လို့ ထင်မြင်အောင် လိမ်ညာခံထားရတယ်ဆိုတာ မြင်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီမိုတွေလိမ်ထားတာကို သိပြီဆိုတော့. . . . လဒ်စားကြီးပွားနေတဲ့ နအဖစစ်ဗိုလ်တွေကို သူတော်ကောင်းလို့သဘောထားပြီး ဒီမိုသမားတွေအပေါ် အမုန်းအဃာတတွေ ပွားတော့မှာလား? ၈၈ အရေးအခင်းမှာ တိုင်းပြည်ကို ချစ်လို့ အသေခံခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေကို ကွန်မြူနစ်တံဆိပ်တပ်ပြီး နှိမ်ချပြောဆိုနေတဲ့ နအဖမီဒီယာတွေကို အမှန်တွေပြောနေတယ်လို့ ယူဆတော့မှာလား၊။
ခင်ဗျားတို့တွေက မုဒိမ်းကျင့် လူသတ်ဖို့ သင်ကြားထားတဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒီတွေအပေါ် မေတ္တာထားဖို့ ကျုပ်တို့ကို ပြောဆိုဆုံးမတယ်။ မုဒိမ်းကောင် ကြာကူလီတပည့်တွေမှာလဲ လူကောင်းတွေရှိသေးတယ်ဆိုပြီးလဲ ပြောကြသေးတယ်။ နအဖ..ဒီမို .. DKBA .. . KNU .. KIA အားလုံးမှာ လူဆိုးလူကောင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာ အမှန်တရားပါ။ ဘယ်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်မှ မိုဟာမက်လို တဏှာမရူးပါဘူး။ ဘယ်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းကမှ ယုတ်ညံ့တဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒလို မုဒိမ်းကျင့် လူသတ်ဖို့ မညွှန်ကြားပါဘူး။ ဒါဆိုရင် ခင်ဗျားတို့က မွတ်ဆလင်ကိုတော့ မေတ္တာထားနိုင်ပြီး မြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်း တံဆိပ်တွေကြည့်ပြီး ဘာလို့ မုန်းတီးနေကြတာလဲ? ကချင်.. ကယား.. ကရင်.. ဗမာ.. ရှမ်း.. ပအို့.. ရခိုင်စတဲ့ တိုင်းရင်းသား တံဆိပ်တွေကိုကြည့်ပြီး အထင်သေးနေကြတာတွေက မှန်ကန်တဲ့ စိတ်ထားလား?
ကျုပ်တို့ဘလော့လုပ်ထားတာ ဒီမိုမြန်မာတွေနဲ့ အနောက်ဖက်အစိုးရတွေကို မုန်းတီးဖို့မဟုတ်သလို နအဖကို နှိမ်ချပြောဆိုဖို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာအချင်းချင်း မုန်းတီးနေတာတွေကို ရပ်စေချင်တဲ့ စေတနာပဲရှိပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့လည်း မြန်မာပြည်ကြီးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို အမှန်တကယ်ကျော်လွှားလိုတယ်ဆိုရင် အမုန်းတွေရပ်ပါတော့။ မိမိကိုယ်တိုင်က အမုန်းတွေကင်းနေပြီး ဘာမှ မလုပ်ပဲ လက်ပိုက်ကြည့်နေရင် ထူးခြားလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျုပ်တို့ စံနမူထားရမယ့် မြတ်ဗုဒ္ဓဟာ သူ့မှာ ကိလေသာတွေ ကင်းစင်သွားပြီဆိုတာနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး နေသွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့လိုပဲ တခြားသောလူတွေလည်း ကိလေသာတွေ ကင်းစင်အောင် ၀ိရိယကြီးစွာနဲ့ ဆိုဆုံးမတော် မူခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ကျုပ်တို့ကလည်း ငါမှာ အမုန်းအဃာတတွေ ကင်းနေပြီဆိုပြီး ကျေနပ်မနေပါနဲ့ . . . အမုန်းအဃာတ ကြီးနေသူတွေကိုတွေ့ရင် မေတ္တာထားဖို့ နားချပေးကြပါ။ နိုင်ငံရေး အယူဝါဒမတူလို့.. တိုင်းရင်းသား မတူညီလို့ မုန်းတယ်ဆိုတာ အဓိပါယ်မရှိကြောင်း ရှင်းပြပေးပါ။ အခုဆောင်းပါးဖတ်တဲ့ခင်ဗျားဟာ တိုင်းပြည်ကြီး နိမ့်ကျနေတာကို မကြည့်ရက်ဘူးဆိုရင်တော့ အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့် တိုင်းပြည်အတွက် လုပ်ကိုင်ပေးပါ။
ကျနော့မလဲဗျာ..သူ့စာလေးခဏဖတ်မိပါတယ်..ကျနော့အပြစ်လဲပါတယ်ဆိုတော့..လန့်ကနဲတောင်ဖြစ်သွားတယ်.ဟုတ်ကဲ့.ကျနော်တပိုင်တနိုင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်.အခုတော့အဲဒါလေးတောင်မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး..ဆရာ့လိုအရမ်းဆူတဲ့သူတွေ..အရမ်းများနေလို့ပါဆရာရယ်..အဆူခံရအဟိန်းခံရ..ဖမ်းလိုက်မယ်ဆီးလိုက်မယ်အခြိမ်းခံရ.မိတ္တူကူးတဲ့ကလေးတွေတောင်မှ အနှစ်၆၀ထောင်ကျမိန့်ချပြနေ တော့လည်းကျနော်ကြောက်တယ်ကိုဇော်မျိုး.မင်းသုဝဏ်ရဲ့ပြောက်ကျားစစ်သည်ကဗျာထဲကလိုပါဘဲ “တိုင်းပြည်အားကို..အားနာခဲ့ကြောင်းပြောပါလေ“လို့ရှက်ရှက်နဲ့ပြောပါရစေခင်ဗျား..